Ị na-eche mfu na-atụghị anya ya nke ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-eso ụzọ Instagram?
Yana inwe nsogbu ịchọpụta ihe kpatara nke a ? nke ọma, ọ bụkwa otu anyị ka ọ dị. M na -echekarị ihe kpatara na m na -efunahụ ndị na -eso ụzọ na Instagram n'agbanyeghị mbọ m niile na ihe niile m mere iji dọta ndị na -eso ụzọ.
Ọzọkwa, Abịara m nkwubi okwu na nsogbu ọ bụla chọrọ ngwọta. Ya mere, n'isiokwu a, anyị ga-enyere gị aka ịmata ihe kpatara ị na-atụfu ndị na-eso ụzọ Instagram gị wee nyere gị aka idozi ha.
gịnị kpatara m ji na-efunahụ ndị na-eso ụzọ instagram 5 kpatara na otu esi edozi ya ?
Ịhapụ ndị na-eso ụzọ bụ akụkụ ebumpụta ụwa nke ahụmịhe Instagram yana usoro iwulite akaụntụ Instagram gị.. Ọ bụghị onye ọ bụla ga-enwe ekele maka ihe omume gị mgbe niile, ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ime mmemme na-esochi na-esoghị, na ị nwere ike ịme omume na-eduga ndị ọzọ ịchụso gị n'amaghị ya.
Mana nsogbu bụ nke a : gịnị kpatara m ji na-efunahụ ndị na-eso ụzọ na Instagram ? Iji nye azịza ajụjụ a, ebe a anyị ewepụtala ihe ise kpatara na ị na-atụfu ụfọdụ ma ọ bụ ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ Instagram gị.
Ihe kpatara 5 kpatara ị na-atụfu ndị na-eso ụzọ na Instagram
1.	Ndị mmadụ na Instagram na-ahọpụta karịa
Instagram anọwo ogologo oge ; ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ amụbaala nke ọma n'ime afọ na, ya mere, Ọtụtụ mmasị ndị mmadụ maka ụdị ọdịnaya ha na-amasị ịhụ na ndepụta ha agbanweela.
Nke a na-egosi na ị nwere ike tufuo ndị na-eso ụzọ Instagram n'ihi ikesa ọdịnaya ochie ma ọ bụ nke na-adịghị mkpa..
2.	Ị na-adịkarịghị biputere na Instagram, ma ọ bụ kwa Ugboro.
Ọ bụrụ n’ịchọpụtala na ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ na Instagram na-agbada ngwa ngwa karịa ka ọ na-abawanye, usoro mgbasa ozi gị nwere ike ịta ụta.
Ọ bụrụ na ị naghị ebipu ọtụtụ oge, ndị debanyere aha gị agaghị enwe ohere ịgụ ọdịnaya gị na ndepụta akụkọ ha, nke nwere ike ime ka ha ghara iso gị ọzọ. N'akụkụ aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị biputere ọtụtụ oge, ka anyị kwuo ugboro isii n’ụbọchị ma ọ bụ karịa, ọ na-agwụ ike na ọ nwere ike ime ka ndị debanyere aha gị kwụsị iso gị.
3.	Mmetụta mbụ ezighi ezi
Mmetụta mbụ bụ isi, ya mere kpachara anya ka ị ghara imebi ya ! N'ọnọdụ ọ bụla, E wezụga foto gị, ihe mbụ ndị na-eso ụzọ ọhụrụ na-ele anya bụ bio gị, ya mere jide n'aka na ị ga-eji ntụaka ma ọ bụ nhota ndị a pụrụ ịdabere na ya mejupụta ya.
4.	Enweghị nghọta na nkwụsi ike na isiokwu ahụ
Ọ bụrụ na ndepụta akụkọ gị adịghị mma, na foto dị iche iche, agba na ndò na-ekwekọghị ekwekọ na ogo onyonyo agbanwe agbanwe, ị nwere ihe ize ndụ ịgbanyụ ndị nwere ike iso. N'akụkụ aka nke ọzọ, ma ọ bụrụ na ị nwere ọdịnaya pụrụ iche na ihe ndị na-agbanwe agbanwe, ị ga-enweta ndị na-eso ụzọ n'oge adịghị anya. Ya mere jide n'aka na ị na-egwu egwu ka ị na-anọgide na-agbanwe agbanwe.
5.	Nkọwa okwu na -agwụ ike ma ọ bụ na -agwụ ike
Foto ndị mara mma nwere ike ime ka ndị na-eso ụzọ gị nwee obi ụtọ, mana nkọwa okwu na-adọrọ adọrọ na-adọrọ mmasị ndị na-agụ gị. Ya mere, ma ọ bụrụ na isiokwu gị na-agwụ ike ma ọ bụ na-adịghị mma, ndị debanyere aha gị ga-agwụ ike ma nwee ike ghara iso gị.
Ụzọ 5 iji dozie ya
1.	Na-agbanwe agbanwe ma mee mgbanwe iji gbanwee
Mgbanwe bụ ihe a na-apụghị izere ezere, karịsịa n'ụwa a na-emepe emepe na na Instagram. Ya mere mụta ime mgbanwe maka usoro ọhụrụ ma na-agbanwe agbanwe n'ụzọ gị na ha.. Mepụta ma kesaa ọdịnaya na isiokwu na-agbanwe agbanwe na ndepụta gị, ị ga -enwetakwa ọtụtụ ndị na -eso ụzọ.
2.	Nwee ọnọdụ ziri ezi na mgbe niile
Dị ka ị na-etinye oge niile na ndepụta gị, Ndị na-eso ụzọ gị ga-amalite ịmụta ma mara nke ọma na ọdịnaya ọ bụla, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ mara mma. Ya mere, nwee mmemme kwesịrị ekwesị na mgbe niile 1 ka 2 posts kwa ụbọchị, ọnụ ọgụgụ ndị na -eso ụzọ gị ga -abakwa ụba.
3.	Profaịlụ amatara
Ọ dị mfe : Naanị ihe ị chọrọ bụ foto na-adọrọ adọrọ ma dị mma, yana nrụtụ aka na ntozu ndị a ma ama na profaịlụ gị. N'ụzọ nke a, ndị na-eso gị ga-achọ iso gị.
4.	Na-agbanwe agbanwe na nkenke na ọdịnaya gị
Ịgbanwe ọdịnaya na-akpasukarị iwe. Ya mere, nwee ọdịnaya ziri ezi mgbe ị na -ezipu na Instagram ; nọrọ n'otu isiokwu wee kpọọ egwuregwu ahụ. Ị nwere ike, agbanyeghị, mezie ọdịnaya gị dabere na mmemme kalịnda., dị ka ụbọchị Valentine na ndị ọzọ.
5.	Mepụta akụkọ ifo na-adọrọ mmasị ma dị egwu
Otu onyonyo naanị ezughị iji kpọkọta ndị na -eso ụzọ ; ị chọkwara akụkọ. Inwe ndepụta okwu na-atọ ụtọ na-enyere aka dọta ma debe ọtụtụ ndị na-eso ụzọ na akaụntụ gị. Nke a dị mkpa na nyiwe mgbasa ozi mgbasa ozi niile, yabụ mepụta akụkọ ifo nke ga-akpali mmasị nke ndị na-eso ụzọ gị ugbu a na n'ọdịnihu.
Edemede gara agaOtu esi enweta ego na Instagram na-enweghị ndị na-eso ụzọ 2021 : Ụzọ 9 Ime
Akụkọ na-esoteOtu esi ebudata vidiyo Instagram na iPhone gị : 3 Ụzọ na ngwa